Kacaya waa moon dhalaalaysa kor ku badda, oo sababo dareen-habboonaanta aniga iyo adiga.
Munaasabadda Mid Dayrta-Festival ah, in aqoonsiga shaqada adag ee dhammaan shaqaalaha sanadkii la soo dhaafay, shirkaddu qabtay Mid-Dayrta Festival dhacdo dhismaha kooxda ee Hotel Sheraton ee bartamihii September 2018 si kor loogu qaado xidhiidhka shaqaalaha, kor u wacyi-shaqaale, oo ha qof walba ku qaataan mid ka mid qurux badan oo aan la ilaawi karin Festival mid-Dayrta.
Inta lagu guda jiro dhacdo, oo ahaa madaxdii waaxyaha kala duwan sameeyey qaybsiga sharaxaad fudud oo ku saabsan xaaladda shaqo ee hadda. Madaxda shirkadda ayaa sidoo kale khudbad gebogebaynta ah. Waxaan rajaynaynaa in qof kasta qaban doona shaqo adag si ay u dhamaystiraan shirkadda ee gool horumarinta ee sannadkan.
Iyada oo iidda si aad u bilowdo jawi shirkadda, iyada oo taasi hawlaha dhismaha kooxda, isgaarsiinta ka dhaxeeya shaqaalaha kor looqaado, xamaasad shaqaalaha waa wanaajiyey, wadajirka kooxda la wanaajiyey, iyo qof walba ha sooco more xamaasad buuxa in shaqada iyo waxbarashada mustaqbalka.
waqti Post: Sep-15-2018